विवेकशील साझाले इमान्दार र उर्जाशील उमेदवार उठाएको छ
उज्ज्वल थापा, प्रतिनिधिसभा उमेदवार (काठमाडौं-५)
२०७४ कार्तिक २२ बुधबार ११:०६:००
वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको विवकेशील साझा पार्टीका नेताहरुले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र अर्को पटक बहुमतसहित देशको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
विवेकशील साझा पार्टीका सह-संयोजक रहेका उज्ज्वल थापाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर पाँचबाट उमेदवारी दिएका छन् । उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ नेकपा एमालेका इश्वर पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महतसँग । यही सेरोफेरोमा पार्टीको चुनावी रणनीति र आगामी योजनाबारे थापासँग बाह्रखरीका शिवनारायण गिरीले गरेको कुराकानी:
मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि मैले पनि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट उमेदवारी दिएकाले चुनाव प्रचार-प्रसारमा व्यस्त छु ।
तपाईंले सुरुमा विवेकशील नेपाली दल किन स्थापना गर्नुभयो ?
यो देशको फोहोरी राजनीतिलाई सफा गर्न कोही जानुपर्छ भन्ने लाग्यो र यसलाई सफा गर्न नयाँ पुस्ता नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ मेरो नेतृत्वमा विवेकशील नेपाली दलको स्थापना भयो । त्यो बेलामा हामीलाई कुन वाद कुन सिद्धान्त केही पनि थाहा थिएन । मैले राजनीति गर्छु भनेर आएको होइन, नेपालमा भएको समस्यालाई सल्भ गर्छु भनेर राजनीतिमा लागें ।
विवेकशील नेपाली दलले यो चार/पाँच वर्षको बीचमा के गर्‍यो ?
विवकेशील नेपाली दलले राजनीति भनेको एउटा समाजसेवा हो भन्ने कुरा अगाडि बढायो । जसले गर्दा विशेषगरी नयाँ पुस्ताले राजनीति भनेको फोहोरी खेल नभइ स्वच्छ रुपमा गर्ने मानव सेवा हो भन्ने बुझे । २०७२ सालमा गएको भूकम्पको बेलामा पनि हामीले धेरै मानवीय सेवा गर्‍यौं, भूकम्प गएको केही समयमा नै टिचिङ हस्पिटलमा गएर मानवीय सेवा गर्‍यौं ।
नेपालमै गरिखाने माहोल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले उद्यमशिलतालाई विशेष फोकस गरेका छौं । हामीले गोलभेंडा उत्पादन ट्रेनिङदेखि आइटीको मेन्टरिङ दिँदै आएका छौं । सुरुवाती चरणमा केहीले वागमती सफाइ अभियानका साथै विभिन्न समाजसेवा गर्दै हिँड्ने भन्दै हामीलाई आइएनजिओको रुपमा पनि बुझे । हामीले दिएको ट्रेनिङबाट २ हजार बढीले गोडभेडा खेती गरेका छन् । कति नेपाली विदेशबाट फर्केर यही पेसा अङ्गालिरहेका छन् ।
साझा पार्टीसँग तपाईंहरुको एकता किन ?
हाम्रो सोच विचारहरु शतप्रतिशत मिल्छ मिल्दैन भन्दा पनि हाम्रो नियत सफा छ, यसकारण हाम्रा सोचहरु मिल्दै जान्छन् । नकारात्मक विचारधारीहरु नराम्रो काम गर्न भन्नेबित्तिकै गुटउपगुट बनाउनमा च्याम्पियन हुन्छन् । हामी सफा नियत भएकाहरु किन फरक-फरक ठाउँमा बस्ने भन्ने सोचका साथ साझासँग पार्टी एकता भयो । उहाँहरुको पनि नियत सफा भएकाले हामीले पार्टी एकता गरेका हौं ।
विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकताको सम्भवना कत्तिको छ ?
हामीले शक्तिमा पुग्नको लागि राजनीति गरेका होइनौं । नैतिक चरित्र र नियतमा हामी धेरै विश्वास गर्छौं । कोही शक्ति र स्वार्थको लागि अस्थिर रहन्छन् । त्यसले गर्दा जनतामा नकारात्मक छाप पर्छ । नियत सफा गरेर उहाँहरु आउनुभयो भने पार्टी एकताको लागि हामी तयार छौं ।
पार्टी एकता भएपछि विवेकशील साझाले के गर्‍यो ?
हाम्रो पार्टी एकता भएको चार/पाँच महिना पनि भएको छैन, हाम्रो विभिन्न जिल्लामा भएका संगठनलाई र साथीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्‍यौं । त्यसलगत्तै मुलुक निर्वाचनमा होमियो र हामी पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्यौं । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि विविध पृष्ठभूमि भएका १ सय ५८ इमान्दार र ऊर्जाशील उमेदवार उठाएका छौं ।
संगठन विस्तारमा कत्तिको चुनौती छ ?
सारा नेपालीले हामीलार्इ नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले यो निर्वाचनलाई सायद व्यारोमिटर बनाउनु भएको छ । यो निर्वाचनको नतिजाले हामीलाई धेरै फरक पार्छ । यो निर्वाचनबाट हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय दल बन्यो भने पुराना राजनीतिक पार्टीदेखि वाक्क भएका धेरै नेपालीलाई विवेकशील साझा पार्टीमा हामफाल्न मन छ । अहिलेका अधिकांश नागरिकहरु पुराना पार्टीदेखि वाक्क छन् । संगठन विस्तारको चुनौतीको कुरा गर्दा १५ जिल्लामा संगठन पहिले नै थियो । पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा प्रदेश संयोजक टुङ्गो लगाएका छौं ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट तपाईंको उमेदवारी किन ?
इतिहास रच्नको लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट मेरो उमेदवारी हो । काठमाडौं ५ भनेको विवेकशील नागरिकहरु बस्ने ठाउँ हो । यहाँ बस्ने नागरिकहरुले चाहिँ यो देशमा बेइमानले होइन, इमानदारहरुले पनि ठाउँ पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण दिन सक्छन् । मैले सुरुदेखि नै यही ठाउँबाट गरेको समाजसेवा र जनसमर्थन भएको हुनाले मैले यही क्षेत्रबाट उमेदवारी दिएको हुँ ।
म यहीं जन्मेँ, हुर्कें र अमेरिका गएर पढेर आएर पनि यही कर्मथलो बनाएर आइटी कम्पनी खोलेर पनि समाजसेवा गरेको भएकाले मैले यो नै निर्वाचन क्षेत्र रोजें ।
लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका उमेदवारहरुसँग कसरी चुनावी मैदानमा उत्रिनुहुन्छ ?
यो कुनै पार्टीको गठबन्धन होइन, सेटिङ हो । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी र राप्रपा, एमालेले सेटिङ गरे, अहिले फेरि ठ्याक्कै एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन बनेपछि उल्टो भएको छ । उहाँहरुलाई परिआयो भने देशमा एउटै गठबन्धन पनि बन्नसक्छ । अहिले सत्ता पक्षमा देश लुट्नेहरु छन् प्रतिपक्षमा हामी जनता छौं, त्यसैले यो गठबन्धन कुनै सिद्धान्त विचारले बनेको होइन, लुट्नको लागि बनेको एउटा सेटिङ हो । त्यसकारण उहाँहरुसँग चुनाव लड्न मलाई कुनै चुनौती छैन किन कि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का मतदाता विवेकशील छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का जनताले तपाईंलाई मत दिने किन ?
क्षेत्र नम्बर ५ का मतदाताको विकल्प भनेको वेइमान र इमान्दारकै हो, किनभने मेरा प्रतिद्वन्द्वी जुन दल र संस्कारलाई रिप्रिजेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरुले यो ठाउँ बनाउन सक्नुहुन्न । उहाँहरुले काठमाडौं ५ र यो देश पनि बनाउन सक्नुहुन्न । त्यसैले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ र यो देश बनाउन जनताले मलाई मत दिनुपर्छ ।
यो क्षेत्रको लागि अहिलेसम्म के-के गर्नुभयो, अब जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ लाई एउटा भिआइपी एरिया बनाउने योजनामा छु । यो ठाउँ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, टिचिङ अस्पताल र बुढानिलकण्ठजस्तो एतिहासिक ठाउँहरु भएको क्षेत्र हो । यसलाई गरिखाने उद्यमशील ठाउँमात्र बनाउन सकियो भने यहाँका बासिन्दाहरुको आयआर्जन बढ्छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ लाई भिआइपी एरिया बनाउन खाकाहरु तयार गरेका छौं र म्यानिफेस्टो पनि बनाएका छौं । मैले यसको लागि खबरदारी गर्ने कामहरु गरेको छु । सांसद् भएपछि यहाँका मेयर, वडाअध्क्षयलगायत सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छु ।
भनेपछि चुनाव जित्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मलाई विश्वास छ, काठमाडौं ५ का नागरिक विवेकशील छन् । त्यसकारण चुनाव जित्नेमा विश्वस्त छु ।
तपाईं र तपाईंको पार्टीले हार्‍यो भने के हुन्छ ?
मैले हारे या जिते पनि देशको सेवामा तल्लिन रहन्छु । सेवा गर्छु । चार वर्षअगाडि पनि म हराइन । अब पनि म हराउनेवाला छैन । त्यसकारण मेरो प्रतिबद्धता भनेको यो देशलाई जबसम्म लुटतन्त्रबाट लोकतन्त्र जोगाउन सकिँदैन, तबसम्म लागिरहन्छु । नेपालको स्वाभिमानलाई अझ मजबुत बनाउन हामी लागिरहन्छौं । हामी निर्वाचन र शक्तिमा पुग्न भनेर मात्र आएको होइनौं । मलाई विश्वास छ अबको चार/पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा पनि दशौं हजार विवेकशील नेतृत्व उत्पन्न गर्छौं, जसले गर्दा यो देशमा विकास र समृद्धि हुन्छ र यो देश विश्वकै केन्द्रबिन्दुमा पर्छ ।
देशैभरि विवेकशील साझा पार्टीका उमेदवारले जित्ने सम्भावना कति छ ? अबको चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ला ?
हाम्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय दल बन्नु हो । राष्ट्रिय दल बन्नलाई एक सिट प्रत्यक्ष जित्नुपर्छ र ३ प्रतिशत राष्ट्रिय मत ल्याउनुपर्छ । हामी विश्वस्त छौं, यसपटक विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रिय दल बन्छ र अर्को पटक पूर्ण बहुमतको सरकार बन्छ ।
चुनाव जितेको खण्डमा आगामी योजना के छन् ?
चुनाव जितेपछि संसद्मा हुने बेथितिलाई रोक्छौं । हामी संसद्को वाचडग हुन्छौं, संसद्भित्र भएका नराम्रो कुराहरुलाई मिडिया र नागरिक समूहका साथीहरुलाई साथमा लिएर सशक्त दबाब दिने काम गर्छौं । हाम्रो चार वर्षीय काम भनेको अब पनि हुन सक्ने शिक्षालगायत विभिन्न नराम्रो कुराहरु संसद्भित्र छिराउन खोज्छन्, त्यस्ता कामहरुलाई रोक्ने हामीले काम गर्छौं ।
आप्रवासी नेपालीलाई कहिलेसम्ममा भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुहुन्छ ?
हामीले पहिलेदेखि नै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनेर दबाब दिने काम गरिराखेका थियौं । त्यो आजसम्म पनि सफल भएन, हामीले पनि त्यसका लागि अब संसद्न नै छिर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौं । संसद्मा पुगेपछि हामी त्यो व्यवस्था गर्छौं । विदेशमा बस्ने ५० लाख नेपालीले मतदान गर्न नपाएपछि हामी साँच्चै लोकतन्त्रमा छौं ? भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यो माहोल बनाउन नीति बनाउने ठाउँमा जानुपर्छ र झक्झकाउनैपर्छ । त्यसपछि हामीले देशभरिका नेपालीको साथमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । अरु पार्टीभित्रका सांसद्हरुसँग पनि मिलेर यो एन पास गराएर अब विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि भोट हाल्न मिल्ने व्यवस्था बनाउँछौं ।
दिनहुँ पलायन भइरहेका युवा रोकथामका लागि तपाईंहरुको पार्टीले के गर्छ ?
यसको लागि नेपालीहरुभित्र भएको संस्कारलाई परिवर्तन गरिदिनुपर्छ । हाम्रो संस्कार भनेको लाहुरे बन्ने छ । त्यसको निराकरणका लागि हामीले उद्यशीलताको वातावरण बनाउँदैछौं ।
तपाईंको पार्टीलाई डलरवादी पार्टी भन्छन् नि, किन ?
बहुदलको नाममा लुटतन्त्र ल्याएर आइएनजिओ फस्टाइरहेका छन् । हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै खर्चको विवरण देखाउने गरेका छौं, त्यसैले हाम्रो पार्टी फन्डेड बाइ नेपाली हो ।
पुरातनवादी सोच भएका मान्छेहरुलाई अर्को कुरा के लाग्दो रहेछ भने उज्ज्वल थापाले अमेरिकामा र रवीन्द्र मिश्रले बेलायतमा आफ्नो ऊर्जाशील समय बिताइ नेपाल फर्किएर राजनीतिको जाल फ्याँके ।
यिनीहरुले विदेशमै विज्ञता हासिल गरेका छन् । विज्ञता हासिल गरेको मान्छे सहरमै काम हुन्छ । त्यसकारण सहरको कुरा गर्छन् । हामी गरिबीलाई सेलिब्रेट गर्ने चङ्गुलमा छौं । गरिबी देखायो भने मागि खाने भाँडो हुन्छ । हामी त गरिबी नदेखाएर समृद्धि कसरी ल्याउने भन्नेमा छौं ताकि मागी खान नपरोस् । नेपाली राजनीतिमा खुट्टा तान्ने चरम बिन्दुमा हामी पनि पर्‍यौं । हामी भनेको नेपाली फन्डेट पार्टी, त्यसमा पनि ८२ प्रतिशत हिन्दू फन्डेड नेपाली पार्टी र १० प्रतिशत बौद्ध बाँकी रहेका सबै जातिको पार्टी हौं हामी ।
अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायत चार बुँदे माग राखेर अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विवेकशील नेपाली लगायतका सहभागी । तस्बिरः रोजित खड्का
राप्रपालाई विवेकशीलले सिकाएको पाठ
विवेकशील नेपाली दलले धुर्मुस सुन्तलीलाई दियो ५ लाख सहयोग
“भ्रष्टाचार” विरुद्ध विवेकशील नेपाली दलको जन-जागरण अभियान